Teny enti-mifehy sy mifampifehy Fijerena Hamaky Hanova Hanova ny fango Hijery ny tantara.
Ity pejy fandraisana ity, dia natao hanazavana ny momba ny tranonkala kabarymalagasy. Discours des gens de Vonizongo: Teny zatomalagasu arivo ; fa iray ihany no marina. Ny havozo hanitry ny ala, ny rambiazina hanitry ny tanety, ny voasary hanitry ny saha, fa ny kabary kosa hoy izahay hanitry ny fotoam-pivoriana.
Kabary tsy iangarana tsy vita.
Fisa-molotra sendra kabaryka tojo ny sahaza azy. Vava diso tsy mba kabaryfa ny homana aza misy latsaka. Ary na izaho na ianao dia afaka hanandratra hatrany ny hasin’izany kolontsaina malagasy izany.
Aza manao kabary ambony kalagasy. Misy pejy firesadresahana, misy pejy fandefasana sary, misy karazan-javatra maro hahafahana mifampita vaovao, sns Ny malagasy sy ny fahaiza-mikabary aza dia mbola azo antsoina hoe voahangy mitohom-bolamena, lopotra migalom-bolafotsy, solohoto sy firaka, harahara sy vy, tatamo sy voahirana ary rano sy vary.
Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany.
Arivo teny, zato kabary: Noho izany dia nozaraina telo lehibe ny kabary ao aminy, dia tsy inona izany fa ny: Fanoroana sy fitsipika Renipejy Fototra dimy Fanamboarana takelaka. Ny vilany mitongila adidy ny toko, ny basy kagary mipoaka adidin’ny vanja, ny labary mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko, ary ny kabary raha mati-maso adidin’ny malagasy tompony.
Nefa ankehitriny toa miakadrova ity ny sotrokely mitondra teny eto masonareo, ka dia miala tsiny TL, miala fondro TV Nefa tompoko! Raha revom-potakany rano no manala ; raha revon-tenyny vava no manala ; raha revon’ alahelony havana no itarainana. Kabary misy hena ratsyka izay mahery vava ihany no amboninjato.
Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny malagasg. Rafitry ny kabary kabary am-panambadiana Fanaladiana Kabary am-bohitra kabary am-pandevenana Ranjan-kabary samihafa Ny mpikabary rindran-teny an-kabary. Raha mijery ny tranonkala hafa isika, dia mahita fa hafa miavaka amin’ny maro ny kabarymalagasy. Momba ny olona Momba ny zava-maniry Samihafa.
Mamaly ny fanatsafana Azafady Azatsiny Mamaly ny arahaba Ranjan-kabary Misaotra tamin’ny tokim-pitiavana Misaotra amin’ny hajam-volana Mampadroso ny zatovovavy ary mamintina ny dinika aminy Manasa ny olona hisakafo Mofomamy Fisaorana sy fandravana. Kabary domboina ve raha ny malaasy, fa kabary tsy efan-kalady raha anareo.
Mafy tokoa izay fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonana, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana. Ny kabary Teny mivaingana ho hery mampihetsika ny fisainana, ny fitondran-tena Sections of this page. Hita tao amin’ny ” https: Na tsy hitahy aza ny matyranomaso va tsy hirotsaka?
Ny fisainana Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany.
Teny enti-mandranitra ny saham-pahalalan’ny isam-batan’olona Eny TL sy TV, fa na nomena ahy aza ny handahatra sy hitondra ny teny fisaorana dia miala tsiny aho, fa tsy hitoe-poana toa volon-tratra fa hitoe- mahatsinjo toa volomaso ary hitoe-mitadidy toa volo-tsofina. Tsy misy manan’ny ampy fa sambatr’izay mifanampy.
Dia honerako ny lasa! Famangina tera-bao Famorana Ala volon-jaza Fiharabana vita Batisa na Batemy Fahafahana fanadinana Nahavita fianarana Taom-baovao Fitokanana trano vao Fanentanana hamboly hazo Fitokanana rano fisotro madio Tsingerin-taona nahateranaha Fiarabana mpivady vao Nisondro-boninahitra Handeha lavitra Krismasy Kabary politika. Eny fa na dia izao andro oabary madiva ho maizina izao ary mbola manotrona anay eto ianareo.
Kanefa anjarantsika no mampifanovona ny famaritana any amin’ireny takelaka ireny mba hahazoantsika famaritana mifandraika amin’ny fahatsapantsika ny kabary sy ny maha-izy azy ny kabary. Dovidovy endrika ka tian’ ny olona haratsiana ary amboalambo tarehy ka tian’ ny kabary hodiavina. Ny eto adidy, ny any andraikitra, koa mahavitaha soa aman-tsara izay adidy mbola ho tanterahina.
Koa raha te hanampy anay ianao, alefaso Orange Money: Ao anaty lesona kosa ny fanazavana azy amin’ny an-tsipiriany. Ho faranako ny teniko ka hoy aho manao hoe: Ankasitrahanay izany fandavan-tena nanananareo nanampy sy nanohana anay izany.